ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်တယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောဆို — မြန်မာဌာန
NLD ပါတီက ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထဲက အချက်တချို့ကို လွှတ်တော်ကနေ ပြင်ဆင်ချက် ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် NLD ပါတီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်ဖို့ အလားအလာတွေ ရှိနေတာလို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်ရွက်မှုအတွက် NLD ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါတီတွင်း သဘောထား ကွဲပြားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါသလားလို့ မေးမြန်းတဲ့အခါ ဦးဉာဏ်ဝင်းက - အမှန်ပြောရရင် ပါတီတွင်းမှာ သဘောထားကွဲပြားမှု ရှိကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာတော့ အားလုံး အညီအညွတ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဦးဉာဏ်ဝင်းက မိမိအနေနဲ့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်တာကို မြင်လိုပါတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ရိုက်တာ သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။
မွတ္ပံုတင္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ ခင္မ်ား ျပည္သူ
NLD must enter to election. then some parties ( except usdp )will stand firm with nld. right now in hlutdaw, no one cannot oppose usdp, because they are not as famous enough as nld, and they don't have the real leader... they need the real leader to make the best dicision for our country's future.
should be do for our country ,,,,